यो ईस्वी संम्वत देखि से ३०० वर्ष पूर्वको घटना हुन । यि कथाहरुमा मनोरंजनको माध्यमबाट नीति र धर्म लाई सम्झाउने प्रयास गरिएकोछ ।
जातक खुद्दक निकाय को दशौँ प्रसिद्ध ग्रन्थ हो । जातकलाई वस्तुतः ग्रन्थ न भनेर ग्रन्थ समूह नै भन्नु उपयुक्त होला । त्यस्को कुनै-कुनै कथानक पूरा ग्रन्थको रूपमा छ र कतै-कतै त्यस्को कथाहरुको रूप संक्षिप्त महाकाव्य-जस्तैछ । जातक शब्द जन धातुबाट बनेको छ । यस्को अर्थ हो भूत अथवा भाव। ‘जन्’ धातुमा ‘क्त’ प्रत्यय जोड़ेर यो शब्द निर्मित हुन्छ । धातुलाई भूत अर्थमा प्रयुक्त गरेर जब अर्थ किया जाता है तो जातभूत कथा एवं रूप बनता है। भाव अर्थ में प्रयुक्त करने पर जात-जनि-जनन-जन्म अर्थ बनता है। इस तरह ‘जातक’ शब्दको अर्थ हो, ‘जात’ अर्थात् जन्म-सम्बन्धीं। । बुद्धत्व प्राप्त गर्ने अवस्थाबाट पूर्व भगवान् बुद्ध बोधिसत्व भनिन्छ । वहाँ त्यस समय बुद्धत्वको लागि उम्मीदवार हुन्छन र दान, शील, मैत्री, सत्य आदि दस पारमिताहरु अथवा परिपूर्णताहरुको अभ्यास गर्नुहुन्छ । भूत-दया को लागि वहाँ आफ्नो प्राणको अनेक पटक बलिदान गर्नुहुन्छ । यस प्रकार वहाँ बुद्धत्वको योग्यताको सम्पादन गर्नुहुन्छ । बोधिसत्व शब्दको अर्थ नै बोधि को लागि उद्योगशील प्राणी हो । बोधिको लागिहो सत्व (सार) जस्को यस्तो अर्थ पनि केहि विद्वानहरुले गरेकोछ । पालि सुत्तहरमा हामी धेरैपटक पढ़छौँ, ‘‘सम्बोधि प्राप्त हुनुभन्दा अघि, बुद्ध नभएको समय, जब म बोधिसत्व नै थिएँ । अतः बोधिसत्वबाट स्पष्ट तात्पर्य ज्ञान, सत्य दया आदिको अभ्यास गर्ने मान्छ त्यस साधक सित छ जस्को पछि गएर बुद्ध हुनु निश्चित छ । भगवान बुद्ध पनि न केवल आफ्नो अन्तिम जन्ममा बुद्धत्व-प्राप्तिको अवस्था भन्दा पूर्व बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो , बरु आफ्नो अनेक पूर्व जन्महरुमा पनि बोधिसत्वको चर्याको उहाँले पालन गर्नुभएकोथियो । जातकको कथाहरु भगवान् बुद्ध को यि विभिन्न पूर्वजन्महरु बाट जबकि उहाँ बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो , सम्बन्धित छ । अधिकान्स कथाहरमा उहाँ प्रधान पात्रको रूपमा चित्रित छन् । कथाको वहाँ स्वयं नायक हुन । कतै-कतै उहाँको स्थान एक साधारण पात्रको रूपमा गौण छ र कतै-कतै वहाँ एक दर्शकको रूपमा पनि गरिएकोछ। प्रायः प्रत्येक कथाको आरम्भ यस प्रकार हुन्छ-‘‘एक समय राजा ब्रह्मदत्तको वाराणसीमा राज्य गरिरहँदा समय (अतीते वाराणसिंय बह्मदत्ते रज्ज कारेन्ते) बोधिसत्व कुरंग मृगको योनिबाट उत्पन्न भएकाथिए अथवा … सिन्धु पारको घोड़ाको कुलमा उत्पन्न भएकाथिए अथवा ….. बोधिसत्व ब्रह्मदत्तको अमात्य थिए अथवा ..बोधिसत्व गोहीको योनिबाट उत्पन्न भएका थिए आदि, आदि।
जातकको कथाहरु मध्यबाट केहिको नामकरण तो जातकमा आएको गाथाको पहोले शब्दहरुबाट भयो, यथा-अपष्णक जातक; कुनैको प्रधान पात्र अनुसार, यथा वण्णुपथ जातक; कुनैको त्यस जन्महरुको अनुसार जुन बोधिसत्वले ग्रहण गरेका थिए यथा, निग्रेध मिग जातक, मच्छ जातक, आदि।
जातकहरुको निश्चित संख्या कति छ, यस्को निर्णय गर्नु बड़ो कठिन छ । लंका, बर्मा र सिआममा प्रचलित परम्परा अनुसार जातक ५५० छन् । समन्तपासादिकाको निदान कथामा पनि जातकहरुको यतिनै भनिएकोछ । ‘‘पण्णासा धकनि पञ्चसतानि जातकंति वेदितब्बं।‘‘ अट्ठसालिनीको निदान कथामा पनि -पण्णासाधिकानि पञ्चजातकसतानि‘‘ छ । संख्या अनुमानित नै निश्चित गरिएको छ । जातकको वर्तमान रूपमा ५४७ जातक कथाहरु पाईन्छ । तर यो सँख्या पनि माथि माथि छ। जातकट्ठवण्णनाकार ले विषयवस्तुको दृष्टिले यसलाई पाँच वर्गहरुमा विभाजित गरेकोछ-
१ पच्चुपन्नवत्थु – बुद्धको वर्तमान कथाहरुको संग्रह हो ।
२ अतीतवत्थु – यस्मा अतीतको कथाँहरु संगृहीत छ ।
४ वैय्याकरण – गाथाहरु व्याख्यायित गरिएकोछ ।
५ समोधन – यस्मा अतीतवत्थुको पात्रहरुको बुद्धको जीवनकालको पात्रहरु सित सम्बन्ध भनिएकोछ ।
जातकको केहि कथाहरु अल्प रूपान्तरको साथ दुई ठाउँ पनि पाईन्छ या एकअरुमा समाविष्ट पनि गरिएकोछ, र यसै प्रकार केहि जातक कथाहरु सुत्त-पिटक, विनय-पिटक, तथा अन्य पालि ग्रन्थहरुमा त पाईन्छ, तर जातकको वर्तमान रूपमा संगृहीत छैन। अतः जातकहरुको संख्यामा धेरै कमीको पनि अरु बृद्धिको पनि सम्भावना छ । उदाहरणतः मुनिक जातक(३०) र सालूक जातक(२८६) को कथावस्तु एकै जस्तो छ, तरकेवल भिन्न-भिन्न नामहरुबाट त्यो दुई ठाउँमा आएकोछ । यसलाई विपरीत ‘मुनिक जातक’ नामको दुई जातक हुँदै त्यस्को पनि कथा भिन्न-भिन्न छ ।
यही करा मच्छ जातक नामको दुई जातक पनि छ। कतै-कतै दूई स्वतन्त्र जातकहरु मिसाएर तेश्रो जातकको निर्माण गरेकोछ । उदाहरण को लागि पञ्चपण्डित जातक(५०८) र दकरक्खस जातक(५१७) यि दुबै जातक महाउमग्ग जातक(५४६) मा अन्तर्भावित छ । जुन कथाहरु जातक-कथाको रूपमा अन्यत्र पाईन्छ, यद्यपि जातक’ मा संगृहीत छैन, उन्को पनि केहि उल्लेख गर्नु आवश्यक होला । मज्झिम निकाय को घटिकार- सुत्त या घटीकार सुत्त (२/४/१) एक यस्तो नै जातक कथाहो , जुन ‘जातक’ मा पाईदैन । यसै प्रकार दीर्घनिकायको महागोविन्द सुत्त(२/६) जुन स्वयं जातकको निदान कथामा पनि ‘महागोविन्द जातक’ को नामबाट निर्दिष्ट भएकोछ, जातकको भित्र पाईदैन । यसै प्रकार धम्मपदट्ठ कथा र मिलिन्द पञ्हमा पनि केहि यस्तो जातक-कथाहरु उद्धृत गरिएकोछ, जुन जातकमा संगृहीत छैन ।
अतः केहि जातक निश्चित रूपले कति छ यस्को ठिक निर्णय हुन सक्दैन । जब जातकहरुको संख्याको सम्बन्धमा विचार गर्छौ तब जातकसित हाम्रो तात्पर्य एक विशेष शीर्षकको कथा सित हुन्छ, जस्मा बोधिसत्वको जीवन-सम्बन्धी कुनै घटनाको वर्णन होस, अनि चाहे त्यस एक जातकमा कति नै अवान्तर कथाहरु किन बनाईएको होस । यदि जम्मा कथाहरु गनीयो भने जातकमा करीब तीन हजार कथाहरु पाईन्छ । वास्तवमा जातकहरको संकलन सुत्त-पिटक र विनय-पिटकको आधारमा गरिएकोछ । सुत्त -पिटकमा अनेक यस्तो कथाहरु छ जस्को उपयोग वहाँ उपदेश दिनको लागि गरिएकोछ । यद्यपि बोधिसत्वको उल्लेख त्यस्मा छैन । यो काम पछि गरेर प्रत्येक कथालाई जातकको रूप दिईयो । तित्तिर जातक(३७) र दीघित कोसल जातक(३७१) को निमार्ण यसै प्रकार विनय-पिटक को क्रमशः चुल्लवग्ग र महावग्गबाट गरिएकोछ । मणिकंठ जातक(२५३) पनि विनय-पिटक मै आधारित छ । यसै प्रकार दीर्घ-निकायको कूटदन्त सुत्त(1१।५) र महासुदस्सन सुत्त(२/४) तथा मज्झिम निकायको मखादेव सुत्त(२/४/३) पनि परै अर्थहरुमा जातक हो । कम भन्दा कम१३ जातकहरुको खोज विद्वानहरुले सुत्त पिटक र विनय-पिटकमा गरेकोछ । यद्यपि राजकथा चोर-कथा एवं यसै प्रकारको भय, युद्ध, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, महिला , पँधेरो, भूत-प्रेत आदि सम्बन्धी कथाहरुलाई तिरश्चीन (व्यर्थको, अधम) कथाहरु भनेर भिक्षु संघमा हेयता को दृष्टि ले हेरिन्थ्यो। त्यहिपनि उपदेशको लागि कथाहरको उपयोग भिक्षुहरु केहि-न-केहि मात्रामा गर्थे ले। स्वयं भगवानले पनि उपमाहरु र दृष्टान्तहरु द्वारा धर्मको उपदेश दिनुभएकोछ । बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ सद्धर्मपुण्डरीक सूत्रको द्वितीय परिवर्त (उपाय कौशल्य-परिवर्त)मा पनि भनिएकोछ बुद्ध अनेक दृष्टान्तहरुबाट (दृष्टान्तशतेहि) तथा जातक(पूर्वजन्म सम्बन्धी कथाहरु) द्वारा सबै प्राणिहरुको कल्याणार्थ उपदेश गर्नुहुन्छ । बुद्धको अतिरिक्त अन्य भारतीय सन्त पनि उपनिषदहरको कालबाट लिएर रामकृष्ण परमहंसको समय सम्म आख्यायिकाहरु र दृष्टान्तहरुको सहारामा धर्मोंपदेश गर्दैछन । यसै प्रवृत्तिको आधारमा जातककथाहरुको विकास भएकोछ । जन समाज मा प्रचलित कथाहरुलाई पनि कही-कहीं लिएकोछ, यद्यपि त्यसलाई एक नयाँ नैतिक रूप दिईएकोछ, जुन बौद्ध धर्मको एक विशेषता हो । अतः सबै जातक कथाहरमा बौद्ध धर्मको पूरै छाप छ । पूर्व परम्पराबाट आउँदै लोक-आख्यानहरको आधार उन्ममा हुन सक्छ, तर त्यस्को सम्पूर्ण ढाँचा बौद्ध धर्मको नैतिक आदर्शको अनुकूल छ। बुद्ध वचनहरुको वर्गीकरण नौ अंङ्गको रूपमा गरिएकोछ, जस्को नाम हुन –
१. सुत्त २. गेय ३. वेय्याकरण ४. गाथा ५. उदान ६. इतिबुत्तक ७. जातक ८. अब्भुतधम्म र ९. वेदल्ल।
सुत्त (सूत्र)को अर्थ हो सामान्यतः बुद्ध उपदेश। दीर्घ-निकाय सुत्त निपात आदिमा गद्यमा राखिएको भगवान बुद्धको उपदेश सुत्त हो।
गेय्य (गेय)- पद्य मिश्रित अंश (सगाथकं) गे य्य भनिन्छ। ‘‘सब्बं पि सगाथक सुत्तं गेय्यं वेदितब्बं।’’
वैय्याकरण (व्याकरण, विवरण, विवेचन) त्यो व्याख्यापरक साहित्य हो, जुन अभिधम्म-पिटक तथा अन्य यस्तै नै अंशहरुमा सन्निहीत छन्।
पद्यमा रचित अंग गाथा (पालि श्लोक) भनिन्छ, यथा धम्मपद आदिको गाथाहरु ।
उदान को अर्थ हो बुद्ध मुखबाट निस्केको भावमय प्रीति-उद्गार या ऊर्ध्व वचन। यि उद्गार सौमनस्यको अवस्थामा बुद्ध मुखबाट निस्केको ज्ञानमयिक गाथाहरुको रुपमा हो । ‘‘सोमनस्सञ्नाणमयिक गाथापटि संयुत्ता।‘‘
इतिवुत्तक को अर्थ हो- ‘यस्तो भनिएको या यस्तो तथागतले भन्नुभयो।’ ‘‘वुत्त हेतं भगवता‘‘ बाट आरम्भ हुने बुद्ध वचन इतिवुत्तक हो ।
जातक को अर्थ हो- (बुद्धको पूर्व) जन्म सम्बन्धी कथाहरु। यि जातकमा संगृहीतछ र केहि अन्यत्र पनि त्रिपिटकमा पाईन्छ ।
अब्भुत-धम्म (अद्भुत धर्म) ति सुत्त हुन, जुन अद्भुत वस्तुहरु योग सम्बन्धी विभूतिहरुको निरूपण गर्छ। अंगुत्तर निकायको ‘‘चत्तारोंमा भिक्खवे अच्छ रिया अब्भुत धम्मा आनन्दे‘‘ जस्तो अंश ‘अब्भुतधम्म’ हो ।
वेदल्ल ति उपदेश हुन जुन प्रश्न र उत्तरको रूपमा लेखिएकोछ , जस्मा आध्यात्मिक प्रसन्नता र सन्तोष प्राप्त गरेर प्रश्न सधियोस । ‘‘सब्बे पि वेदं च तुटिठं च लुद्धा पुचिछतसुत्तन्ता वेदल्लं ति वेदितब्बा।‘‘ चुल्ल वेदल्ल सुत्तन्त महा वेदल्ल सुत्तन्त, सम्मादिट्ठि सुत्तन्त, सक्कपञ्ह सुत्तन्त आदि यस्को उदाहरण हो ।
बुद्ध वचनहरुको यो नौ प्रकारको विभाजन उन्को शैली स्वरूपहरु या नमूनाहरुको दृष्टिले नै, ग्रन्थहरको दृष्टिले होईन । यति प्रकार को बुद्ध उपदेश हुन्थ्यो, यही यस वर्गीकरणको अभिप्राय हो । बुद्ध वचनहरको नौ अंङ्गहरुमा विभाजन जस्मा जातकको संख्या सातौँ हो र अत्यन्त प्राचीन हो। अतः जातक कथाहरु सर्वांशमा पालि-साहित्यको महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग हो । त्यस्को संख्याको विषयमा अनिश्चितता विशेषतः त्यस्को समय-समयमार सुत्त पिटक र विनय-पिटक तथा अन्य श्रोतहरुबाट संकलनको कारण र स्वयं पालि पिटकको नाना वर्गीकरण र उस्को परस्पर संमिश्रणको कारणले उत्पन्न भएकोहो। चुल्ल निद्देसमा हामीलाई केवल ५०० जातकहरको (पञ्च जातक सतानि)को उल्लेख पाईन्छ । चीनी यात्री फाह्यानले पाँचौ शताब्दी ईस्वीमा ५०० जातकहरको चित्र लंका मा अंकित भएको देखेकाथिए। व्दितीय तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्वको भरहुत र साँचीको स्तूपाहरुमा जातकको चित्र अंकित पाईन्छ । जस्मध्य कमभन्दा कम २७ या २९ जातकहरुको चित्रहरुको पहिचान रायस डेविड्सले गरेकाथिए । तब देखि केहि अन्य जातक कथाहरुको पहचान पनि यि स्तूपाहरुको पाषाण-वेष्टनियहरुमा गरसकेकोछ । यि सबै तथ्य जातकको प्राचीनता र उस्को विकासको सूचक हो ।
स्थविरवादी पालि साहित्यको समान संस्कृत बौद्ध धर्मको ग्रन्थहरमा पनि जातक कथाहरु पाईन्छ । पालिको नवांग बुद्ध वचनको जस्तै यहाँ द्वादश अंग धर्मप्रवचन मानिएकोछ । यि दुबै नै ठाउँ जातक एक अंग या धर्म-प्रवचनको भागको रूपमा विद्यमान छन् । बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ जातकमालामा जुन आर्यशूरको रचना भनिन्छ ३४ जातक कथाहरु पाईन्छ । आर्यशूरलाई लामा, तारनाथले अश्वघोषको नै अर्को नाम भनेकोछ यद्यपि यो ठीक लाग्दैन । सम्भवतः ति चतुर्थ शताब्दी ईस्वीका कवि थिए । लोकोत्तरवादिहरको प्रसिद्ध ग्रन्थ महावस्तुमा जुन २०० ई0 पूर्व देखि ४०० ई0 सम्मको बीचको कालमा लेखिएको, करीब ८० जातक कथाहरु पाईन्छ । यस्मध्य केहि पालि जातकको समान छन र केहि यस्तो पनि छ, जुन पालि जातकमा पाईदैन ।
रायस डेविड्सको भनाई छ कि जातकको संकलन र प्रणयन मध्य देशमा प्राचीन जनकथाहरको आधारमा भयो । विण्टरनित्जले पनि प्रायः यसै मतको प्रतिपादन गरेकोछ । अधिकांश जातक बुद्धकालिन छन् । साँची र भरहुतको स्तूपाहरको पाषाण-वेष्टनिहरमार उन्को दृश्यहरुको अंकित हुनु उन्का पूर्व अशोककालीन हुनुको पर्याप्त साक्षी दिन्छ। जातकको काल र कर्तृत्वको सम्बन्धमा धेरै प्रकाश उनको साहित्यिक रूप र विशेषताहरको विवेचनबाट पर्छ । प्रत्येक जातक कथा पाँच भागमा बिभाजित छ ।
१ . पञ्चुप्पन्नवत्थु २ . अतीतवत्थु ३ . गाथा ४ . वेय्याकरण या अत्यवण्णना र ५ . समोधन।
पञ्चुप्पन्नवत्थुको अर्थ हो वर्तमान कालको घटना या कथा। बुद्धको जीवन कालमा जुन घटना घटेको पच्चुप्पन्नवत्थु हो ।त्यस घटना ले भगवानलाई कुनै पूर्वजन्मको वृत्तलाई भन्ने अवसर दियो । यो पूर्वजन्मको वृत्त नैं अतीतवत्थु हो । प्रत्येक जातक को कथाको दृष्टि सबैभन्दा धेरै महत्वपूर्ण भाग यो अतीतवत्थु नै हो । यसैको अनुकूल पच्चप्पन्नवत्थु कतै-कतै बनाईएको लाग्छ । अतीतवत्थु पछि एक या अनेक गाथाहरु आउँछ । यि सम्बन्ध त्यस्तै त अतीतवत्थुबाट हुन्छ यद्यपि कतै-कतै पच्चप्पन्नवत्थु से भी होता है। गाथाएँ जातक के प्राचीनतम अंश हैं। वास्तव में गाथाएँ ही जातक हैं। पच्चुप्पन्नवत्थु आदि पाँच भागहरु सित समन्वित जातक त वास्तवमा जातकट्ठवण्णना या जातकमा वेय्याकरण या अत्थव गणना हुन्छ । यस्मा गाथाहरको व्याख्या र उन्को शब्दार्थ हुन्छ । सबैभन्दा अन्तमा समोधन(समवधान) आउँछ, जस्मा अतीतवत्थु को पात्रहरको बुद्ध को जीवन कालमा पात्रहरको साथ सम्बन्ध मिलाईन्छ, यथा त्यस समय अटारीबाट शिकार खेलनेवाला शिकारी अबको देवदत्त थियो र कुरूंग मृग त मै नैं थिएँ, आदि आदि।
जातकमां बुद्धको पूर्व जन्महरुको कथाहरु संगृहीत छ जबकि उहाँले बोधिसत्व को रूपमा विभिन्न पारमिताहरु पूरा गर्नुभयो र बुद्धत्वको लागि योग्यता सम्पादित गर्नुभयो । सुत्त-पिटकको प्रथम चार निकायहरुमा बुद्धको ऐतिहासिक रूपको नै प्रतिष्ठा छ। पछि जातकमा (तथा बुद्धवंस र चरिया-पिटकमा) उहाँको ऐतिहासिक जीवनलाई पूर्वको कथाहरु सित सम्बद्ध गरेको पाईन्छ । जातकट्ठकथाको निदान कथामा बुद्ध जीवनको तीन निदान भनिएकोछहैं, दूरे निदानमा अत्यन्त दूर अतीतको बुद्ध जीवनको कथा हो, यस्तो मानिन्छ कि अत्यन्त सुदूर अतीतमा बुद्ध सुमेध तपस्वी भएर उत्पन्न भएकाथिए । त्यस समय उहाँले दीपंकर बुद्धमा बड़ो निष्ठा देखाउनुभयो जस्को परिणामस्वरूप उहाँले पछि गएर बुद्ध हुने आशीर्वाद दिए । अनेक जन्महरु सम्म विभिन्न शरीर धारण गर्दै सुमेध तपस्वीको साधना चलिरहेको । अन्तमा वेस्सन्तर राजाको रूपमा शरीर त्याग गरेर वहाँ तुषित लोकमा गए । सुमेध तपस्वीको रूपबाट लिएर तुषित लोकमा जाँदासम्म बुद्धको यो साधना कथा दूर निदानको अन्तर्गत छ । ५४७ जातक कथाहरु अपण्णक जातकबाट लिएर वेस्सन्तर जातक सम्म बुद्ध जीवनीको यस दूरे निदान बाट नै सम्बन्धित छ । यि कथाहरुबाट यहाँ तात्पर्य छ यिनमा वर्णित अतीतवत्थु। यिनको सम्बन्ध बुद्धको जीवन-कथाको दूरे निदान सित छ अर्थात् यि धेरै टाढा अतीतको कथाहरु हो । लुम्बिनी वनमा जन्म लिने समय देखि लिएर बोधि-प्राप्ति हुँदा सम्मको कथा अविदूरे निदान सित सम्बन्धित छ । अर्थात त्यो त्यति टाढा अतीतको होईन । बोधि प्राप्ति देखि लिएर निर्वाण प्राप्ति सम्मको बुद्ध जीवनी सन्तिको निदानको अन्तर्गत हो अर्थात त्यो नजीकको हो ।
। जातकको पच्चुप्पन्नवत्थुमा यस्को केहि अंश प्रस्तावना रूपमा आउँछ । जातकको कहानिहरमा अतीतवत्थमा बुद्ध जीवनीको दूरे निदानको भित्र समाविष्ट उन्का पूर्व जन्महरको कथाहरु आउँछ । ऐतिहासिक बुद्धको जीवनको कुनै घटनाको उल्लेख गरेर यि दूरे निदानको कथाहरु भन्नको लागि अवकाश निकालिएको हो । जुन वास्तवमा जातकको निर्माण गर्छ ।
प्रत्येक जातकको पाँच अंगहरको उपर्युक्त विवेचनबाट स्पष्ट छ कि जातक गद्य-पद्य मिश्रित रचनाहरु हुन । गाथा (पद्य) भाग जातकको प्राचीनतम भाग मानिन्छ । त्रिपिटकको अन्तर्भूत यस गाथा भागलाई नै मान्नु धेरै उपयुक्त होला । शेष सब अट्ठकथा हुन। परन्तु जातक-कथाहरुको प्रकृति यस्तो छ कि मूललाई व्याख्या देखि अलग गर्नाले केहिपनि नबुझिन सक्छ । केवल गाथाहरु कथाहरुको निर्माण गर्दैन । त्यसमाथि जब वर्तमान र अतीतको घटनाहरुलाई ढाँचा चढ़ाईन्छ तब कथावस्तु को निर्माण हुन्छ । अतः पूरै जातकमा उपर्युक्त पाँच अवयवहरु आवश्यकछ जस्मा गाथा-भागलाई छोड़ेर शेष सबै उस्को व्याख्या हो पछि जोडिएको हो । फेरिपनि सुविधाको लागि र ऐतिहासिक दृष्टिबाट गलत ढंगमा हामी त्यसलाई जातक भन्छौँ । वास्तवमा ५४७ जातक कथाहरुकझ संग्रहलाई जुन उपर्युक्त पाँच अंगहरु सित समन्वित छ, हामी जातक नभनेर जातकट्ठवण्णना (जातक को अर्थ को व्याख्या) या जातकटठकथा नै भन्नुपर्छ । फॉसबाल र कॉवलले जस्को क्रमशः रोमन लिपिमा र अंग्रेजीमा सम्पादन र अनुवाद गरेकोछ या हिन्दीमा भदन्त आनन्द कौसल्यायनले ‘जातक’ शीर्षकबाट ६ भागहरुमा अनुवाद गरेकोछ, त्यो वास्तवमा जातक नभएर जातकको व्याख्या हो। जातक कथाहरु त मूल रूपमा केवल गाथाहरु हो, शेष भाग त्यस्को व्याख्या हो ।
गाथा र जातकको शेष भागको कालक्रम आदिको दृष्टिले केपारस्परिक सम्बन्ध छ यो प्रश्न अगाडी आउँछ । अटठ्कथामा गाथा-भागलाई अभिसम्बुद्ध गाथा या भगवान् बुद्ध द्वारा भाषित गाथाहरु भनिएकोछ । ति बुद्धवचन हुन । अतः ति तिपिटक को अंगभूत थियो र त्यसलाई त्यहाँबाट संकलित गरेर त्यस्को माथि कथाहरको ढाँचा प्रस्तुत गरियो । सम्पूर्ण जातक ग्रन्थ को विषयवस्तुको जुन आधारमार वर्गीकरण भएकोछ,
त्यसबाट पनि यही स्पष्ट छ कि गाथा-भाग, याजसलाई पिण्टरनित्ज आदि विद्वानहरुले गाथा-जातक भनेकोछ, त्यहि त्यस्को मूलाधार हो। जातक ग्रन्थको वर्गीकरण विषय-वस्तुको आधारमा नभएर गाथाहरुको संख्याको आधारमा भएको छ । थेर-थेरी गाथाहरुको समान त्यो पनि निपातहरुमा विभक्त छ । जातकमा २२ निपात छन् । पहिला निपातमा१५० यस्तो कथाहरु छ जस्मा एकको एक गाथा पाईन्छ । दोश्रो निपातमा पनि १५० जातक कथाहरु छ तर यहाँ प्रत्येक कथामा दुई-दुई गाथाहरु पाईन्छ । यसै प्रकार तेस्रो र चौथो निपातमा पचास-पचास कथाहरु छन र गाथाहरुको संख्या क्रमशः तीन-तीन र चार-चार छन्। पछि पनि तेह्रौँ निपात सम्म प्रायः यही क्रम चल्छ । चौधौँ निपातको नाम पकिण्णक निपात हो । यस निपातमा गाथाहरुको संख्या नियमानुसार १४ नभएर विविध छ । यसैले यसको नाम पकिण्णक (प्रकीर्णक) रादिएको हो । यस निपातमा केहि कथाहरुमा १० गाथाहरु पनि पाईन्छ र केहिमा ४७ सम्म पनि पाईन्छ । पछिको निपातहरुमा गाथाहरको संख्या निरन्तर बढ़दै गएकोछ । पन्ध्रौँ निपातको शीर्षक हो वीस निपात, सोह्रौँको तिंस निपात, सत्रौँको चवालीस निपात, अट्ठारौँको पण्णास निपात ,उन्नाईसौँ सठ्ठि निपात, बीसौँको सत्ततिनिपात र एक्काईसौँको असीतिनिपात। बाइसौँ निपातमा केवल दस जातक कथाहरु छन तैपनि प्रत्येकमा गाथाहरुको संख्या सय भन्दा माथि छ । अन्तिक जातक (वेस्सन्तर जातक)मा त गाथाहरुको संख्या सातसय भन्दा माथि छ ।
यि सबैबाट यो निष्कर्ष निस्कन्छ कि जातक कथाहरुको आधार गाथाहरु नै हुन । स्वयं अनेक जातक कथाहरको वेय्याकरण भागमा पालि र अट्ठकथाको बीच भेद देखाईएकोछ, जस्तै कि पालि सुत्तहरको अन्य अनेक अट्ठकथाहरु तथा विसुद्धिमग्गों आदि ग्रन्थहरमा पनि । जहाँ सम्म जातकको वेय्याकरण भागबाट सम्बन्ध छ, त्यहाँ पालिको अर्थ तिपिटक गत गाथानै हुनसक्छ । भाषाको साक्ष्यबाट पनि गाथा भाग धेरै प्राचीनताको द्योतक हो अपेक्षाकृत गद्य भागको । पिण्टरनित्जले भनेकाछन की सम्पूर्ण गाथाहरुलाई तिपिटकको मूल अंश मान्न सकिँदैन । त्यस्मा पनि पूर्वापर भेद छ। स्वयं जातकको वर्गीकरण बाट नै यो स्पष्ट छ । चौधौँ निपात (पकिण्णक निपात)मा प्रत्येक जातक कथाको गाथाहरुको संख्या नियमानुसार १४ नभएर कतै-कतै धेरै छ । यसै प्रकार बीसौँ निपात (सत्तति निपात)मा त्यस्को दुई जातक कथाहरुको संख्या सत्तरी-सत्तरी नभएर क्रमशः ९२ र ९३ हो । यि सबैबाट निष्कर्ष निकालीएको हो कि जातकको गाथाहरु अथवा गाथा जातकको मूल संख्या निपातको शीर्षकको संख्याको अनुकूल नै होला। र पछि त्यस्को संवर्द्धन गरीयो । अतः केहि गाथाहरु धेरै प्राचीन छन् र केहि अपेक्षाकृत कम प्राचीन छन् । यसै प्रकार गद्य भाग पनि केहि अत्यन्त प्राचीनताको लक्षण लिएकोछ र केहि अपेक्षाकृत अर्वाचीन छ । कुनै कुनै जातकमा गद्य र गाथा भागमा साम्य पनि देखिँदैन र कतै कतै शैलीमा पनि ब८ विभिन्नता छ । यि सबै भन्दा जातक को संकलनात्मक रूप र उस्को भाषारूपको विविधतामा प्रकाश पर्छ जस्मा केहि रचनाहरु या संकलनकर्ताहरु कैयौँ शताब्दिहरुको योग रहेकोछ ।
जातकको गाथाहरुको प्राचीनता त निर्विवाद छ नै , त्यस्को अधिकांश गद्य भाग पनि अत्यन्त प्राचीन छ । भरहुत र साँची को स्तूपाहरुको पाषाण वेष्टनिहरमा जुन चित्र अंकित छ ति जातकको गद्य भाग बाट नै सम्बन्धित छ । अतः जातकको अधिकांश गद्य-भाग जुन प्राचीन छ, तृतीय, व्दतीय शताब्दी ईस्वी पूर्वमा यति लोकप्रिय त हुनै पर्छ कि त्यसलाई शिल्प कलाको आधार बनाउन सकियोस । अतः सामान्यतः हामी जातकलाई बुद्धकालीन भारतीय समाज र संस्कृतिको प्रतीक मान्न सक्छौँ । त्यस्मा केहि लक्षण र अवस्थाहरको चित्रण प्राग-बुद्धकालीन भारतको पनि छन र केहि बुद्धको कालको पछिको पनि छ । जहाँ सम्म गाथाहरको व्याख्या र त्यस्को शब्दार्थको सम्बन्ध छ त्यो सम्भवतः जातकको सबैभन्दा धेरै अर्वाचीन अंश छ। यस अंशको लेखक आचार्य बुद्ध घोष मानिन्छ । ‘गन्धवंस’ अनुसार आचार्य बुद्धघोष ले नै ‘जातकट्ठण्णना’को रचना गरे, तर यो सन्दिग्ध छ भनिनन्छ । भाषाशैलीको भिन्नता देखाउँदै केहि अन्य निषेधात्मक कारण दिँदै डॉ॰ टी. डब्ल्यू रायस डेविड्स ले बुद्धघोषलाई जातकट्ठवण्णनाको रचयिता वा संकलनकर्ता मानेकोछैन । स्वयं जातकट्ठकथाको उपोद्घातमा लेखकले आफ्नो परिचय दिँदै भनेकाछन ‘‘ ….शान्तचित्त पण्डित बुद्धमित्त भिक्षु बुद्धदेवले भनेमा …….. व्याख्या गरुँला । महिशासक सम्प्रदाय महाविहारको परम्परा भन्दा भिन्न एक बौद्ध सम्प्रदाय थियो । बुद्धघोषले जति अट्ठकथाहरु लेखेकाछन, शुद्ध महाविहारवासी भिक्षुहरको उपदेश विधिमा आधारित छ। अतः जातकट्ठकथाको लेखकलाई आचार्य बुद्धघोष सित मिसाउनु ठिक होईन सम्भवतः यो कुनै अन्य सिंहली भिक्षु थिए, जस्को काल पाँचौ शताब्दी ईस्वी मान्न सकिन्छ ।
भवतु सब्ब मङ्गलम् ।
जातकहरुको निश्चित संख्या कति छ, यस्को निर्णय गर्नु बड़ो कठिन छ । लंका, बर्मा र सिआममा प्रचलित परम्परा अनुसार जातक ५५० छन् । समन्तपासादिकाको निदान कथामा पनि जातकहरुको यतिनै भनिएकोछ । ‘‘पण्णासा धकनि पञ्चसतानि जातकंति वेदितब्बं।‘‘ अट्ठसालिनीको निदान कथामा पनि -पण्णासाधिकानि पञ्चजातकसतानि‘‘ छ । संख्या अनुमानित नै निश्चित गरिएको छ ।
जातकको केहि कथाहरु अल्प रूपान्तरको साथ दुई ठाउँ पनि पाइन्छ या एकअरुमा समाविष्ट पनि गरिएकोछ, र यसै प्रकार केहि जातक कथाहरु सुत्त-पिटक, विनय-पिटक, तथा अन्य पालि ग्रन्थहरुमा त पाईन्छ, तर जातकको वर्तमान रूपमा संगृहीत छैन। अतः जातकहरुको संख्यामा धेरै कमीको पनि अरु बृद्धिको पनि सम्भावना छ । उदाहरणतः मुनिक जातक(३०) र सालूक जातक(२८६) को कथावस्तु एकै जस्तो छ, तर केवल भिन्न-भिन्न नामहरुबाट त्यो दुई ठाउँमा आएको छ । यसलाई विपरीत ‘मुनिक जातक’ नामको दुई जातक हुँदै त्यस्को पनि कथा भिन्न-भिन्न छ ।
यही कुरा मच्छ जातक नामको दुई जातक पनि छ। कतै-कतै दुई स्वतन्त्र जातकहरु मिसाएर तेश्रो जातकको निर्माण गरेकोछ । उदाहरण को लागि पञ्चपण्डित जातक(५०८) र दकरक्खस जातक(५१७) यि दुबै जातक महाउमग्ग जातक(५४६) मा अन्तर्भावित छ । जुन कथाहरु जातक-कथाको रूपमा अन्यत्र पाईन्छ, यद्यपि जातक’ मा संगृहीत छैन, उन्को पनि केहि उल्लेख गर्नु आवश्यक होला । मज्झिम निकाय को घटिकार- सुत्त या घटीकार सुत्त (२/४/१) एक यस्तो नै जातक कथाहो , जुन ‘जातक’ मा पाईदैन । यसै प्रकार दीर्घनिकायको महागोविन्द सुत्त(२/६) जुन स्वयं जातकको निदान कथामा पनि ‘महागोविन्द जातक’ को नामबाट निर्दिष्ट भएकोछ, जातकको भित्र पाईदैन । यसै प्रकार धम्मपदट्ठ कथा र मिलिन्द पञ्हमा पनि केहि यस्तो जातक-कथाहरु उद्धृत गरिएकोछ, जुन जातकमा संगृहीत छैन ।
अतः केहि जातक निश्चित रूपले कति छ यस्को ठिक निर्णय हुन सक्दैन ।
जब जातकहरुको संख्याको सम्बन्धमा विचार गर्छौ तब जातकसित हाम्रो तात्पर्य एक विशेष शीर्षकको कथा सित हुन्छ, जस्मा बोधिसत्वको जीवन-सम्बन्धी कुनै घटनाको वर्णन होस, अनि चाहे त्यस एक जातकमा कति नै अवान्तर कथाहरु किन बनाईएको होस । यदि जम्मा कथाहरु गनियो भने जातकमा करीब तीन हजार कथाहरु पाईन्छ । वास्तवमा जातकहरको संकलन सुत्त-पिटक र विनय-पिटकको आधारमा गरिएकोछ । सुत्त -पिटकमा अनेक यस्तो कथाहरु छ जस्को उपयोग वहाँ उपदेश दिनको लागि गरिएकोछ । यद्यपि बोधिसत्वको उल्लेख त्यस्मा छैन । यो काम पछि गरेर प्रत्येक कथालाई जातकको रूप दिईयो । तित्तिर जातक(३७) र दीघित कोसल जातक(३७१) को निमार्ण यसै प्रकार विनय-पिटक को क्रमशः चुल्लवग्ग र महावग्गबाट गरिएकोछ । मणिकंठ जातक(२५३) पनि विनय-पिटक मै आधारित छ । यसै प्रकार दीर्घ-निकायको कूटदन्त सुत्त(1१।५) र महासुदस्सन सुत्त(२/४) तथा मज्झिम निकायको मखादेव सुत्त(२/४/३) पनि परै अर्थहरुमा जातक हो । कम भन्दा कम१३ जातकहरुको खोज विद्वानहरुले सुत्त पिटक र विनय-पिटकमा गरेकोछ । यद्यपि राजकथा चोर-कथा एवं यसै प्रकारको भय, युद्ध, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, महिला , पँधेरो, भूत-प्रेत आदि सम्बन्धी कथाहरुलाई तिरश्चीन (व्यर्थको, अधम) कथाहरु भनेर भिक्षु संघमा हेयता को दृष्टि ले हेरिन्थ्यो। त्यहिपनि उपदेशको लागि कथाहरको उपयोग भिक्षुहरु केहि-न-केहि मात्रामा गर्थे ले। स्वयं भगवानले पनि उपमाहरु र दृष्टान्तहरु द्वारा धर्मको उपदेश दिनुभएकोछ । बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ सद्धर्मपुण्डरीक सूत्रको द्वितीय परिवर्त (उपाय कौशल्य-परिवर्त)मा पनि भनिएकोछ बुद्ध अनेक दृष्टान्तहरुबाट (दृष्टान्तशतेहि) तथा जातक(पूर्वजन्म सम्बन्धी कथाहरु) द्वारा सबै प्राणिहरुको कल्याणार्थ उपदेश गर्नुहुन्छ ।
बुद्धको अतिरिक्त अन्य भारतीय सन्त पनि उपनिषदहरको कालबाट लिएर रामकृष्ण परमहंसको समय सम्म आख्यायिकाहरु र दृष्टान्तहरुको सहारामा धर्मोंपदेश गर्दैछन । यसै प्रवृत्तिको आधारमा जातककथाहरुको विकास भएकोछ । जन समाज मा प्रचलित कथाहरुलाई पनि कही-कहीं लिएकोछ, यद्यपि त्यसलाई एक नयाँ नैतिक रूप दिईएकोछ, जुन बौद्ध धर्मको एक विशेषता हो । अतः सबै जातक कथाहरमा बौद्ध धर्मको पूरै छाप छ । पूर्व परम्पराबाट आउँदै लोक-आख्यानहरको आधार उन्ममा हुन सक्छ, तर त्यस्को सम्पूर्ण ढाँचा बौद्ध धर्मको नैतिक आदर्शको अनुकूल छ।
बौद्ध जातक कथाहरु
चराहरुको सल्लाह बाँदरहरुलाई यो एउटा रोचक कथाहो हितोपदेशबाट संग्रहितः एक समयमा एउटा नदीको किनारमा रुख थियो । त्यो रुख चराचुरुङ्गीहरुको लागि मानो घर जस्तै थियो । ति सबै आनन्दले बस्दै आएकाथिए । एकदिन आकाशमा काली बादल छायो र दह्रो बर्षा भयो । केहि बाँदरहरु ट्ट्यही अर्को रुखमा खेलिरहेकाथिए तिनिहरुलाई आपतपर्यो जाडोले थुरथुर काँप्नथाले । चराहरुले बाँदरलाई भन्यो ए बाँदरहरु तिमिहरुको यस्तो बस्ते ठाउं छैन तिमीहरुले पनि यस्तै बनाएकोभए हुन्थ्यो नि । जब हामी आफ्नो यो स्यानो चुच्चोले गुँड बनाउन सक्छौभने तिमीहरुले किन सक्तैनौ । जबकि भगवानले तिमीहरुलाई दुई हात पनि दिएकाछन । यो कुरा सुनेर बाँदरहरुलाई रीस लाग्यो र भने कि यि चराहरुलाई अब पाठ सिकाउनुपर्यो पर्ख बर्षा त रोकिनदेउ बडो हामीलाई अर्ति दिने भएकाछौ । अनि हामीले खाईदिन्छौ कसरी घर बनाउने भनेर । बर्षा पनि रोकीयो । बाँदरहरु रुखमा चढेर गुँडहरु भत्काईदिए अण्डाहरु भुईमा फालिदिए विचरा चराहरु डरले यताउती उडन थाले र सोंचे बेक्कारमा तिनिहरुलाई सल्लाह दिएछौ निदनुपर्ने आफैलाई आपतपर्यो । सल्लाह त्यस्तालाई दिनु जो बुद्धीमानछ जस्ले सोध्छ ।
अन्धो गिद्ध र चराहरु हितोपदेशमा यो पनि एउटा रोचक कथाछ एक समयमा पहाडको को तल सुनसान नदी थियो । त्यहाँ रुखहरुमा चराचुरुङ्गीहरु बस्थे । एक दिन एए६ कानो गिद्ध त्यहाँ बस्न आयो ।अरु चारहरुले उस्लाई बुढो भएकोले स्वागत गर्यो ।त्यो कानो गिद्धले जब चराहरुलाई देखेर रमाए र सोंचे मलाई यिनिहरुले कति मायाँ गरेको । चराहरुले उस्लाई खान दिनेथ्यो र गिद्धले पनि त्यसै गरेर रमाएर बसेकाथिए ।एक दिन एउटा बिरालो त्यो रुखमा आयो । बिरालो आएको देखेर चराहरु कराउन थाले । बिरालोले चराको बच्चालाई समातेर खाने आसा गरेको थियो ।स्यानै बच्चाले देखेर बेस्सरी करायो । कानो गिद्धले सोध्यो कोहो त्यहाँ नहेरेरै ।बिरालोले सोंच्यो हे भगवान म मरेको जस्तै गर्न जानेकवछु तर बलीयो हुनुपरछ है र मैले निधो गर्नुपर्छ ।एक पटक बिरालोले भन्यो ए बुद्धीमान म आएं है । गिद्धले सोध्यो तिमी को हौ । बिरालोले भन्यो म बिरालो हुं ।गिद्धले भन्यो यहाँबाट गैहाल नत्र ठीक हुन्न है मै खान्छु तिमीलाई । बरालो चलाख थियो उसेले तुरुन्तै भन्यो गिद्धज्यू मेरो कुरा सुन्नुहोस । तपाईले कुरै नबुझि तुरुन्त यस्तो निर्णय गर्नु ठीक हो। हाम्रो यस संगैको यात्रामा। गिद्धले निर्णय गर्यो उस्को कुरा सुन्नलाई बिरालोले भन्यो म नदीको अर्को छेउमा बस्छु मैले तपाईको विद्वताको बारेमा धेरै सुनेकोछु चराहरुबाट तिनहरुले मलाई भनेकोछ कि मैले धेरै कुराहरु धर्मको बारे सिक्नुपर्छ त्यसैले म यहाँ आएकोहुं तपाईको शिष्टता सीप र ज्ञान सिक्न ।अनि उस्ले भन्यो मैले केहि पनि मनमा लिन्न ति चराहरुले के सत्य भन्यो भनेर जब तपाई म कमजोरलाई मार्न तयार हुनुहुन्छ । तपाईले त मलाई राम्री सम्मान गर्नुपर्छ हामी त सबै भगवान कहाई बाट आएका हौ अतीथि भएर । यदि तपाई सित मलाई सम्मान गरेर ख्वाउने केहि छैन भने तपाईले मलाई राम्रोसित भन्न सक्नुहुन्छनि । बुढो गिद्धले भन्यो मैले कसरी पत्याउन सक्छु तिम्रो कुरा । बिरालो त चलाख थियो । उस्ले आफ्नो कानले भुई छोएरल ईमकान्दार सोझोले झैं र भन्यो मैले धेरै कुरा पढे जानेकोछु सत्यताको हत्या भैरहेकोछ भनेर । मैले किन चराहरुलाई मार्छन त भनेर बुझ्न आएकोहुं ।बुढ गिद्धले उस्को बाठो कुरा माथि पत्याएर रुखमा बस्नदियो । दिन बित्दै गएपछि बिरालोले गिद्धले थाहा नपाउनेगरि स्याना चराहरु एक एक गर्दै खान थल्यो । चराहरुले देख्यो कि बच्चाहरु त कम देखिन्छ नि अनि तिनिहरुले यता उति बच्चालाई खोज्यो । बुढो गिद्धले के भैरहेको केहि थाहाछैन यस्सो उस्ले रुखको तल हेरेको त बिरालोले चराका बच्चाहरु खाएर हड्डी फालेको देख्यो । जब चराहरुले ति फालिएका हड्डीहरु देखेर सोंच्यो हेर यो गिद्धले त हाम्रो बच्चा खाएर हड्डी फालेको । चराहरुले त्यो बुढो गिद्धलाई कुरै नबुझेर ठुंगेर मार्न थाल्यो । गिद्धलाई भन्ने कुने अवसरनै दिएन तिनिहरुले र मारिदयो । कुरै नबुझि कसैलाई तेसै सजाय नदेउ । हात्ती र स्याल हितोपदेशमा यो बडो राम्रो कथाहो । एक समयमा एक जङ्गलमा करपुरातिलका नाको एउटा हात्ती थियो । जङ्गलमा बलीयो भएर जता ततै चाहार्थ्यो जङ्गलका सारा जनावर त्यो सित डराउंथ्यो ।त्यो हात्तीले अनावश्यक रुपमा रुखका हाँगा भाँचेर झार्थ्यो यस्तो बेलामा चराका गुँड अण्डाहरु फालिन्थ्यो अनि उस्ले खुट्टाले कुचेर नष्ट गर्थ्यो। जङ्गलका अन्य जनावरहरु बाघ सिंह स्यालहरु त्यो भन्दा टाढै बस्थे । त्यो हात्ट्टीको बानी देखेर रीसले त्यसलाई मार्न चाहान्थ्यो तर बडो मुश्कील थियो । स्यालले एउटा बैठक बोलायो हात्तीलाई कारवाही गर्न जे पनि गर्न तयार थिए तर हात्तीलाई मार्न सरल थिएन । सबैले सल्लाह गरे त्यो मूला हात्तीलाई कसरी मार्ने ।तुरुन्तै एउटा बुढो स्यालले भन्यो सबै मलाई छोडीदेउ मैले एपाय निकाल्छु चलाखिपूर्वक त्यसलाई मार्ने योजना बनाउंछु । अर्को दिन बुढो स्याल हात्ती नजिक गयो र शिष्टाचारपुर्वक अभिवादन गर्यो र भन्यो महामहीम तपाई प्रति हामी गौरव गर्छौं । हात्तीले स्यालतिर हेरेर ठूलो स्वरमा गर्जेर भन्यो तँ को होस ? बुद्धिमान स्यालले उत्तरदियो महामहीम म एउटा कमजोर स्याल हुँ सरकार तपाईको महानता प्रति जानकारी नहुने यहाँ को छ र ? तपाईं साह्रै दयालु हुनुहुन्छ अनि साह्रै नम्र बुद्धिमान हुनुहुन्छ । हजूरलाई मनमा लिनुस कि हामीले हजूरलाई हाम्रो राजाको रुपमा चुनेकाछौं कृपया स्विकार गर्नुहोस । स्यालको कुरा सुनेर हात्ती साह्रू खुसिभयो स्यालले यहि मौका छोप्यो सरकार समस्त जनावरहरु राजाको रुपमा राज्यारोहण समारोह भएको हेर्न चाहान्छन । यो हाम्रो जङ्गलको बिचो बिचमा गर्ने योजनाछ सरकार जहाँ हजारौं जनावरहरु भेला हुनेछन् । हाम्रा ज्योतिषले भनेकाछन कि समय तिब्रगतिमा सुतिरहेकोछ कृपया मेरो साथमा आउनुहोस ढीलो नगरेर । हात्ती स्यालको कुरा सुनेर धेरै रमायो र राजा हुने सपना देख्न थाल्यो र स्यालको साथमा समारोह बिच जङ्गलमा हिंड्यो । बाटोमा अलि साईघुरो भएर जानु पर्थ्यो । स्याल त सजिलै निस्केर पार गर्यो तर हात्ती साँघुरो बाटोमा छिर्न खोज्दा अड्कीयो धेरै कोशिश गर्यो बरु निस्केर फर्कन्छु भन्ने सोंच्यो तर सकेन कति कोशिश गर्यो । हात्तीले स्यालालई गुहार्यो साथी कृपया सहयोग गर म त मर्न आँटें । चाँडै अरु जनावर साथीहरुलाई बोलाउ त म त मर्छु अब । स्यालले उत्तर दियो आ हा हा म तँलाई बचाउन सक्तीन तीमी बदमास हौ तैले मेरो बच्चाहरु धेरैलाई मारी सक्यौ चराहरुका गुँडहरु धेरै नष्ट गरेकाछौ बेईमान । माफ गर अब तँलाई कुनै हालतमा बचाउन सक्तीन भन्दै स्याल उम्केर गयो र भन्यो अब तेरो ईहलिला अब यहि समाप्त हुन्छ मर अब ।
Moral: Every despot has to meet his doom. एक समयमा एकजना शिकारी गाउंमा बस्थ्यो । उ आफ्नो परिवारको साथमा खुसि साथ बसिरहेको थियो ।एक राम्रो बिहान नजिकको जङ्गलमा हरीनको शिकार गर्ने बेला निराश भएछ । उस्ले हरीनलाई देखेपछि तुरुन्तै मार्छ र खुसिहुंदै झुण्ड्याएर घर लयाउंछ । उ अलि कति पर सम्म हिंडुनु पर्थ्यो तब उस्ले जङ्गली जनावर देख्यो जो डरलाग्दी थियो । दुबै जना त्यहिं मर्ने बाँच्ने स्थिमा देखियो । केहि समय पछि एउटा स्याल पनि आईपुग्छ उस्ले मान्छे डर लाग्दो जनावर भालु देख्छ नजिकै भुईंमा मरेको हरीन देख्छ ।भोकाएको स्याल मासु धेरै भन्दा धेरै खान चाह्यो। मासुको चोक्टा मुखमा राख्न चाहंदै भन्यो आह क्या मज्जाको मेरो भाग्य यस्तो देखिन्छ कि अलिकति मासु त खाई हाल्नुपर्छ कि क्याहो यो लामो समय पछि अलि कति खाईहालुं न त । उस्ले सोंच्न थाल्यो कि यस्ती मज्जाको मासु त पहिलो चोटी खान पाईएकोछ । उ बस्तारे रगत चाट्छ मासुबाट चुहिएको थियो तीरको चारैतिर लागेको रगत । तर छीटो भन्दा छिटो उस्ले तीरलाई मुखमा च्याँपेर फाल्न लागेको त मुखबाट छिरेर टाउकोमा निस्क्यो । स्यालले लोभ गरेर त्यहीं मर्यो। Moral: Greed never pays. बाँदरहरु र घण्टी एक समयमा एउटा गाउंमा रबर बस्थ्यो । एकदिन मन्दीरमा घण्टी बजाएर दौडेर जङ्गलमा गयो । बाघले घण्टी बजेको सुन्यो र कताबाट यो आवाज आएको रहेछ भनेर चारैतिर हेर्यो । त्यहिबेला उस्ले रबरलाई देख्यो र एकै पटक झम्टेर मारिदियो। घण्टी भुईंमा खस्यो । केहि दिन पछि एक बाँदरको समूह त्यो बाटोबाट गयो । त्यो ठाउंबाट तिनिहरुले घण्टी उठाएर घर लग्यो र। तिनहरुले घण्टीलाई देखेर खुबै मज्जा मान्यो घण्टी बजाउंदै खेल्न थाल्यो । राती बाँदरहरु पहाडको माथि टुप्पामा बस्यो र पटक पटक घण्टी बजाउंदै खेल्ल थाल्यो । गाउंका मानिसहरु घण्टीको हल्लाल् डरायो । गाउंका मान्छेहरुले रबरको लास भेटाए र सेंचे कि पक्कै यो भूतको आतमा हुनुपर्छ यहाँ मान्छेहरुला मार्यो अनि घण्टी बजाएर रमायो । गाउंलेहरुले यो कुरा सुनेर सोंच्यो कि पक्कै जङ्गलमा कुनै शिकारीले बदमासी गरिरहेकोछ । फरेरि अर्कोले सोंच्यो कि अब हर तिर बस्न पो थाल्यो डरले । एक जना बलीयो र बुद्धीभएको महिला थिईन् गाउंमा । उस्ले विचार गर्यो मैले यस्तो अन्धविश्वासको पत्याउंदीन कुनै भुतले गाउंमा सताईरहेकोछ भन्नेकुरा मैले पत्ता लगाएरै छाड्छु यो घण्टी बज्ने कुरा ।मध्यरातमा उनी जङ्गलमा गईन् र बाँदरको एक समूह घण्टी सित खेलिरहेको भेट्टाईन । त्यो महिलाले राती जङ्गलमा घण्टी बज्नुको रहस्य फेला पारिन् । उनी राज समक्ष पुगिन् र भनिन सरकार म यो कुरामा विश्वस्त भए कि यो भूत प्रेतको आतमा देवताको पूजा गरेपछि समाधान हुनसक्छ तर यस्मा अलि खर्च लाग्छ । यदि हजूरबाट यो स्विकृति हुन्छ भने मैले त्यस डराउन दिनेलाई मारेर गाउंलाई खुसि गर्न सक्छु । राजा यो घटनाबाट आफ पनि डराएको थियो र महिलाको अनुरोधलाई स्विकार गरियो । महिलाले रकम पाएपछि केहि केहि केराउ मम्फली र केरा फलफूल लिईन् देवताको पूजा गर्ने साम्ग्रीको चाँजोपाँजो मिलाईन् । उनी एक गोलो घेरा बनाईन र सबै खानेकुरा त्यहाँ राखिन र त्यसपछि ति सामान लिएर जङ्गलमा गईन् र पहाडको नजिक । ति खानेकुराहरु रुख निर राखिदियो र केहि परबाट बाँदरले के गर्ने रहेछ भनेर चेवा लियो । जब बांदरहरुले खानेकुराहरु देख्यो घ्णटी त्यहिं छोडेर दौडेर खानेकुरा समात्यो । त्यहिबेला महिलाले घण्टी लिएर दौडेर गाउंतिर लाग्यो र घण्टी लगेर दरबारमा राजालाई दियो । राजा धेरै खुसि भयो बहादुर महिलाको काम देखेर बहादुरी कामको पुरस्कार दियो । त्यहिबेला देखि त्यहां कुनै घण्टीको हल्ला सुनिएन र खुसिपुर्वक गाउंलेहरु बस्न थाले । समीक्षाःकुनै घटनामा त्यत्तिकै डराउने होईन बुद्धि पुगायो भने हरेक काम सफल हुन्छ ।
बुढो बाघ र लोभी यात्री एक समय जङ्गलमा एउटा बाघ बस्थ्यो । केहि बर्ष बितेपछि बुढो भयो । एक दिन बाघ हिंडी रहेको थियो त्यहि बेला एउटा सुनौलो रीङ्ग देख्यो । उ छीटो छिटो गएर समात्यो र सोंच्यो यसबाट केहि समात्न सकिन्छ । यात्रि खुसि भएर बसेको थियो । बाघलाई तुरुन्तै शंका लाग्यो र यसो हेर्यो यो केको लागि के खानको लागि बनेको होला । उस्ले यात्रीलाई आकर्षित गर्न तरिका सोंच्यो । ए यात्री तिमी लाई यो मन पर्छ कि हेर हेर यो सुनको चक्का ।मलाई त मन पर्दैन । एकपटक यात्रीले त्यो सुनौलो रीङ्ग लिन चाह्यो तर बाघको नजिक जान डरायो । उस्लाई थाहाछ नजिक जानु खतराछ तैपनि उस्ले यस्सो सुनौलो रीङ्गलाई हेर्यो । उस्ले योजना गर्यो र बाघलाई सोध्यो मैले तिमीलाई कसरी पत्याउं कि ? मलाई थाहाछ तिमीले मलाई मार्छौ । चलाख बाघले तुरुन्तै भन्यो “सुन यात्री, म जान छंदा, म एकदम बहादुर र बदमास थिएं,आजभोली म परिवर्तन भएकोछु मएक सन्यासोको सल्लाहले मैले सबै बदमासी छोडीदिएं । म आजभोली एकदम एक्लै बस्छु यो संसामा दयाको आवश्यकछ त्यसैले म दयालु भएकोछु । म बुढो हुंदै गएकोछु म सित दाँत पनिछैन हेरन । अनि त्यो यात्री सुनौलो रीङ्ग लिन मन लागेर बाघको चलाकी कुरा पत्यायो र बाघलाई नाघेर हाम्ल्यो । तर बाघ योजना अनुसार धैर्य गरेर भन्यो ओहो तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन मैले सघाउंछु त भनेर अघि आएर यात्रीलाई च्याप्प समात्यो । यात्री डराएर उबाट उम्कन खोज्यो । राम्रो भनेको संधै राम्रै हुन्छ मैले बाघको मीठो कुरामा नभुल्नुपर्ने साह्रै गल्ती भयो । मेरो लोभी मनले गर्दा आज फंसीयो अब के गर्ने अब ढीलो भयो भन्ने सोंच्दा सोंच्दै बाघले यात्रीलाई मारेर मीठो भोजन गर्यो । यात्रीमा लोभले जित्यो र बाघको दुष्ट योजना सफलभयो । लोभले कहिलै भलो गर्दैन .
खरायो र हात्ती एक समयमा एउटा जङ्गलमा चतुरदन्त नाम गरेको हाज्ञी राजा थियो। त्यहां जङ्गलको बिचमा ठूलो घाटी थियो । जहां सबै जनावरहरु पानी पीउन र नुहाउन जान्थे । एकपटक घटना भयो त्यतिबेला बर्षैभरि बर्षा भएन । सुख्खा भयो जताततै पानी सुक्यो जनावरहरु प्यासले छटपटीन थाल्यो थुप्रै चराहरु र जनावरहरु मरे । हात्तीहरु दुखि भयो यदि तिनिहरुले पानी पिउन पाएन भने तिनहरु पनि प्यासले मर्नेछन । हात्तीहरुले एउटा निर्णाय गरे र चतुरदन्त राजामा बिन्ती गरेर भने सरकार हजूरलाई थाहै छ कि जङ्गलमा आजभोली पानी छैन थुप्रै चराहरु र अरुजनावरहरु प्यासै मरे । पानीको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं । यदि हामी केहि दिन यसै यहाँ बस्यौंभने हामी मर्छौं । कसरी पानी पाउन सकिन्छ पत्तालगाउनुपर्छ । चतुरदन्त राजाले भन्यो अब हामीले अर्कै ठाउंthमा जानु पर्छ पानीको खोजीमा । सौभाग्यले एकले अलि टाढा पानीले भरीएको घाटी पत्ता लगाएको खबर सुनेर राजा खुसि भए र सबैलाई त्यहाँ जान निर्दश गरे ।. यो घाटीमा यति पानीले भरिएकोछ कि जतिनै बर्षा नभएर सुख्खा परेपनि पानीको कमी हुंदैन । बाटैमा खरायोहरु बसेका थिए। त्यही खरायो बसेको ठाउंबाट हात्तीहरुलाई जानु पर्थ्यो । हजारौं खरायोहरु हात्तीको त्यो गह्रुंगो खुट्टाले कुल्चीए कति घईतेभए । सारा खरायोहरु ८रले थरथर काँपेर दुलोमा लुकेर बसेका थिए । तब खरायोका राजाले यो अवस्थामा बैठक बोलायो । बैठकमा राजाले भन्यो मैले सुनें कि हात्तीहरु हाम्रो क्षेत्रमा आईपुग्योरे हाम्रा हजारौ साथीहरु मारीएकाछन् र म अरु साथीहरु यसरी नमरुन भन्ने चाहन्छु । हानमीले सुरक्षाको विचार गर्नु पर्छ ।सबै खरायोहरुले के गर्ने भनेर बुझनै सकेन त्यहि बेला स्यानो खरायोले आफ्नो योजना भन्यो सरकार यदि तपाई मलाई दुतको बनाएर हात्तीको राजाकहाँद् पठाउनुहुन्छ भने यो समस्याको समानधान गर्ने म सित उपाय छ ।खरायोको राजाले स्विकृति दियो लेकतिर जान ।जब तिनहरुले सुनेकि हात्तीहरु फर्कंदैछन घाटीबाट तिनीहरुले सोंचे कि अब यो असम्भवछ अगाडी जान अनि पहाडमा थि चढेर भन्यो ए हात्तीको राजा कृपया मेरो कुरा सुन्नुहोस खरायोको आवाज सुनेर हात्तीराजा चतुरदन्त रोकियो । अनि सोध्यो को हौ तिमी?कहाँबाट आयौ ? यहाँ किन आएको?खरायोको दुतले भन्यो भगवान चन्दको एउटा सूचनाछ तपाईंलाई।दुतले सत्य कुरा बोल्छ। कृपया दुतलाई कुनै सजाय दिनुहुंदैन है उस्ले के भन्न लागेकोछ । उस्लै आफ्नो काम गर्नु पर्छ मसित नरिसाउनु। अनस राजा चतुरदन्त
ले लौ भन्न चाहेकाहौ ।स्यानो खरायोले भन्यो भगवान चन्द्रमा तपाईंहरु सित रिसाउनुभएकोछ । किन कि तपाईघहरुले पबित्र र शान्तीको घाटीमा अशान्ती पुगाउनुभएकोछ । तपाईंहरुले हजारौ खरायोहरुलाई कुल्चेर मार्नुभएकोछ यस्मा तपाईहरुलाई वहाँले डण्ड सजाय गर्नुहुनेछ । यदि तपाईहरुले भगवान चन्द्रको कुरा अटेढ गर्यो भने अवश्य सजायको भागिदार हुनुहुनेछ ।हात्ती राजा यो कुरा सुनेर अलि स्तवध भए खरायोको कुरा सुनेर भने हो ७क हशो यहाईबाट जांदा हामी बाट धेरै खरायोहरु च्याँपिएछन । वास्तवमा हामीले त्यसो गर्न चाहेको होईन कुनै हालतमा अब हामीले हेरेर हिंडनेछौं । भगवान चन्द्रमासित हाम्रो विनम्र अनुरोधछ हामी बाट भूल भयो हामीलाई माफ गर्नुस केगर्नु पर्छ सुझाव दिनुहोस ।खरायोले उत्तर दियो ठीकैछ म तपाईलाई लिएर जान्छु भगवान चन्द्रमाकहाँ अनि सो ध्नुस यो अपराध गरे वापत के सजाय भोग्नुपर्छ ल आउनु मेरो साथमा। रातीको समयमाहानत्ती राजालाई घाटीमा लग्यो र दुबै जना टघाटीको किनारमा उभिए नदीमा चन्द्माको छायाँ थियो अनि हल्का नीलो नीलो भएर चलाएमान देखिएको थियो।जब हात्ती राजाले यो देख्यो र सोंच्यो साँच्चै भगवान चन्द् रिसाएकै रहेछ भनेर अभिवादन गर्यो । खरायोले भन्यो हे भगवान चन्द्रमा हात्ती राजाले अपराध स्विकार गर्नुभएकोछ । वहाँलाई दया गरिदिनुस र अब यहाँबाट गएर फेरि फर्कनेछैन
चतुरदन्तले फेरि अभिवादन गर्यो र तुरुन्तै त्यहाँबाट प्रस्थान गरे । र खरायोहरु खुसिसाथ रहन थाले ।
Moral: Wit can win over might. बौद्ध जातक कथाबाट पुजारीको छोरी एक समयमा बुद्धीमान मान्छे नदीको किनारमा बस्थ्यो । उनको श्रीमतीबाट कुनै बच्चाहरु थिएन त्यसैले अलि निरास थिए । एकदिन पुजारी आत्मग्लानी भएर आफैलाई निरास भएर बसेका थिए ।त्यतिनै बेला एउटा ठूलो खेलौना जस्तो मुसी देखेर खुसिभए । पुजारीले सोंच्यो भगवानको शक्त्तीले त्यो मुसी मलाई पठादियो । उस्ले त्यो खेलौना जस्तो मुसीलाई घर लिएर जानुपर्ने सोंचे मान्छेहरु देखेर हाँस्नेछन । अनि उस्ले त्यो मुसीलाई केटीको रुपमा परिवर्तन गर्ने सोंचेर केटी प्रार्थनाको शक्त्तीले बनायो ।
पुजारीले उस्को घरमा केटी ल्यायो केटीलाई देखेर उस्को श्रीमतीले सोधीन् को हुन यिनि कहाँबाट ल्याउनुभयो केटीलाई ? पुजारीले सबै घटना बतायो र भन्यो मैले यिनिलाई साँच्चिकै रुपमा बनाउन चाहन्छु । पुजारीको श्रीमतीले तुरुन्तै त्यो कामलाई रोकिन र भनिन् म भिख माग्छु यस्लाई साँच्चै मुसीको रुपमा न ल्याउनुस । तपाईले यसलाई जीवन दिनुभएकोछ त्यसैले बुवा हुनुभयो आज देखि तपाई यस्को बुवा म आमा । भगवानले हामीलाई पठाईदिनुभएको हो किन कि हामी सित कुनै बच्चा छैन । पुजारीले श्रीमतीको कुरा मान्यो । तिनहरुले त्यो केटीलाई आफ्नै छोरीलाई जस्तै व्यवहार गर्न थाले । तिनी हेर्दा हेर्दै तरुनी भईन् । १६ बर्ष पुगेछि बिहे गरिदिने विचार गरिन् र श्रीमान सित सोधिन् कुनै जोडी मिल्ने केटो छैन र भन्या हाम्री छोरीको लागि लौन। पुजारीले एउटा विचार सोंच्यो र सुझाव दियो सूर्य नै राम्रो होला । श्रीमतीले यो कुरा मानिन् र पुजारीले प्रार्थना गर्यो सूर्य भगवान प्रकट भयो । पुजारीले सोध्यो हे सूर्य मेरो छोरी सित बिहे गर्छौ कि । छोरीले भनिन् म सूर्य सित बिहे गर्दीन साह्रै तातो बलीरहेकोछ । पुजारीले छोरीलाई त्यहाँबाट हटाएर सूर्य सित सोध्यो हे सूर्य भगवान यदि तपाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ भन्नुहोस के गर्ने । सूर्य भगवानले भने महान बादल सुहाउला यिनि सित उ त एक्लैछ जस्ले सूर्यलाई छेक्न सक्छ । अनि बादललाई प्रार्थना गरेर भन्यो मेरो छोरी सित बिहे गर्नुस । छोरीले बादल सित बिहे गर्न मानिनन् यस्तो कालो बादल सित बिहे गर्दीन । बादलले भन्यो हेर्नुस न म त चीसोले जमि हाल्छु पानी भैहाल्छु। अनि पुजारीले सोध्यो लौन को छन् सुझाव दिनुस न । बादलले भन्यो हावा सबै भन्दा उत्तम होला किन भने मलाई त सजिलै बगाएर लैजान्छ । म भन्दा बलीयो छ । पुजारीले त्यसै गरि हावालाई प्रार्थना गर्यो केटीले मानिनन् हावाले भन्यो मलाई त हिमालले छेकि दिन्छ म भन्दा त पहाड जाती हुन्छ । त्यसै गरि पहाडले भन्यो म अलि कठोर छु म भन्दा त मुसा बलीयो छ मज्जैले मलाई प्वाल पार्छ । अनि छोरीले सहर्ष स्विकार गर्छिन । पुजारीले केटीलाई केटी मुसाको रुपमा परिवर्तन गर्छ र केटो मुसा सित बिहे गरिदिन्छ । मुसा र मुसीहरु खुसि सित बस्न थाले । वंश परिवर्तन हुन सक्तैन ।
त्जभ ब्लबलमब द्यजययmष् ब् द्यगममजष्कत ःयलतजथि
बद्ध–जन्मभ ु मि राष्ट्र न ू पालमा ब े द्धधम ु र्का विकास, े
अध्ययन–अध्यापन आदि क्षत्र अभ े m पनि आ ै भे mलमा ग े ज्रिरह ु का े े
छ । बद्धका यावत धम ु –उपर्द शल स े गृहीत मा ं लिक ग्रन्थका ै
रूपमा सत्रपिटक, विनयपिटक र अभिधम ू पिटकरूपी र्स यं क्त ु
स्वरूप त्रिपिटकलाइ त्रिपिटक र्ब द्धधम ु र्क सवा ै धिक प्रामाणिक ग्रन्र्थ
मानिन्छ । यद्यपि बद्धशिक्षा–दश ु नर्का विकासक्रमका े इतिहासमा े
अनका े निकायवाद शिक्षण–पद्धत्ति एकपछि अका ंै विकास भएर्क े ै
हन् । उपद ु श–रूप वा व्यवहार द े शनामाप े mत् अधिचित्त–शिक्षालार्र्इ
समटिएर चित्तश े द्धि पक्षलाइ ु र्जा डदिन े शिक्षा स े त्रपिटकभित्र ू
गाभिएका हन्छन् । स ु यम–रूप वा आज्ञा द ं शनामाफ े त् अधिशीलर्–
शिक्षालाई समेटिएर नीति, नियम,
विधिविधान, अकुशल मनोवृत्ति वा
अराजकता नियन्त्रणाथ र्जा डदिन े शिक्षा े
विनयपिटकभित्र गाभिएका हन्छन् । यसरी ु
नै तŒव–रूप वा उच्चतर परमार्थ
दशनामाप े mत् अधिप्रज्ञा–शिक्षालार्इ सर्म टिएर े
चित्त–मन बार से क्ष्मभन्दा स ू क्ष्म मना ू वृत्ति– े
चित्तवृत्तिसम्बन्धी सचेतता वा चित्त,
चतसिक, रूप र निवा े णसम्बन्धी गम्भीर्र
दशन अवर्बा ध गन े र्जा डदिन े शिक्षा े
अभिधमपिटकभित्र गाभिएका र्ह न्छन् । ु
विभिन्न ग्रन्थहरू सूत्रपिटकअन्तर्गत
दीघनिकाय, मज्झिमनिकाय, सयं त्तनिकाय, अ ु गं त्तरनिकाय, ु
खद्दकनिकाय गरी पाँचवटा मह ु Œवपणू ग्रन्थहरू छन् । यीमध्र्य मा े
पनि खद्दकनिकायअन्तग ु त १५ वटा ग्रन्थहरू छन्, जसमध्र्य े
एउटा महŒवपणू ग्रन्र्थ “जातक” हा “जातक” । जातक–पालि र जातक– े
कथा यी दइुवर्ट अन्या ै न्याश्रित ग्रन्थ ह े न् । जातक–पालि ु
श्लाकबद्ध गाथाम े सीमित छन् भन ंै ती गाथालाइ े जातकर्–
कथाल प्रष्ट्याउन े –परिभाषित गन े कार्य े गर्द छ र्।
“जात” अथा “जात” त जन्मसम्बन्धी घटना–कथात्मक वृतान्र्त
भएर जातक भनिएका हा े । तथागत सम्यक् सम्ब े द्धलु बे द्धत्व– ु
ज्ञानप्राप्ति गन क्रममा पारमिता, उपपारमिता र परमार्थ े र्–
पारमिता गरी तीसवटा पारमिता ९एभचाभअतष्यल० पणू गर्र्न े
अभ्यास गरिरहेका बोधिसŒव (भविश्यमा बुद्ध हुने) को
जीवनीसम्बन्धी धम–सन्र्द शमे लक न ू तिक पक्ष उजागरित कथात्मक ै
सग्रह न ं जातक–कथा हा ै । जातक–पालिमा स े ग्रहीत ६,५५२ ं
वटा गाथा–श्लोकलाई अभिसम्बुद्ध–गाथा भनिन्छ । सा ुद्ध–गाथा ेही
गाथा अनकल ५४७ वटा जातक ू
कथा–सग्रह गन ं श्र्रे य े अट्ठकथाचार्य
भिक्षु ब ुद्धघोष महास्थविर ष महास्थविर ष महास्थविरलाइ ष महास्थविर ष महास्थविर्र
जान्छ, उनलाई इ.सं. ३८०–४४०
तिरका मानिन्छ । जातक–कथालार्इ े
२२ वटा निपातअन्तगत विभिन्न वर्ग र्–
परिच्छदमा विभक्त गरिएका छन् । कथामा भ े मिका प्रधान ू
पात्र, विषयवस्तु÷कथावस्तुको वर्णित विषयअनुसार
जन्मस्थितिअनसार, विषयवस्त ु का ु प्रतिनिधित्व गराइ े जातर्क
कथाका शीष े क निर्धा रण गरिएर्का अध्ययनबाट स्पष्ट ह े न्छ । ु
समग्र जातक–कथा लाक साहित्यिक ग े णलु े
यक्त मात्र नभइ ु र्ब द्धधम ु सित सर्रा कार सम्प े र्णू
बद्धधम ु ावलम्बीहरू बीच र्बा धिसे Œवका आदर्श े
पक्षलाइ सर्म टिएर जान े ने तिक क्षमता अत्यन्त ै
सबल पक्ष मान्न सकिन्छ । गद्य–पद्यशलीय ै
उत्कृष्ट नमना जातक–कथालाइ ू र्ब द्धधम ु र्–
बद्धशिक्षा क्ष ु त्रमा विश्वका े ष मानिन्छ । सम्प े र्णू
जातक–कथामा बद्धशिक्षा प्रतिविम्बित रह ु का े े
हन्छ । यसरी न ु इतिहास, साहित्य एव ै धामि ं र्क
दृष्टिल अधिक मह े Œवपणू जातक–कथार्का े
अध्ययन सवथा सार्प क्ष द े खिन्छ । विश्व–कथा े
साहित्यमा जातक–कथाका कत्तिका े आयामिक े
प्रभाव परका छन् भन्न े तथ्य हिन्दी, अ े ग्र ं जी, जम े नी, प्र्र mन्च, े
इटली आदि भाषाका कथा साहित्यका े अध्ययनबाट स्पष्ट े
हन्छ । विश्वका अधिका ु श प्राचीन धामि ं क एर्व सामाजिक वा ं
लाक कथाका े स्रा े त जातक कथा भएका े प े ष्टी ह ु ँदुछ । ै
महाभारत, रामायण, पञ्चतन्त्र, हितापदे श, इ े शपर्का कथा, े
अरवियन नाइट्स वा अलिफल े ला आदि स्थापित कथा साहित्यका ै े
श्रात–प े ञ्ज हा ु — जातक–कथा । महाभारत, रामायण, प े राण ु
साहित्य रचनामा समत जातक–कथाका े प्रभाव क े कति छन् े
भन्न के रा भारतका प्रसिद्ध विद्वान भद्दन्त आनन्द का ु शल्यायनका ै े
हिन्दी अनवाद जातकमा व्यक्त मह ु Œवपणू कथाबाट स्पष्र्ट
हन्छ । वत ु मान रामायण कथामा २४,००० श्र्ला क छन् । े
परन्त बा ु द्ध महाविभाषा शास्त्रअन ै रूप द्वितीय शताब्दी इ ु श्वीर्मा
रामायणमा १२,००० श्लाक मात्र छन् भनी भारतीय विद्वान े
हमचन्द्र राय चा े धरील ै पा े लिटिकल हिस्ट्री अफ एन्सियन्ट े
इण्डियाका पृ.३ मा उल्ल े ख गर े का छन् । यसरी न े रामायणका ै े
सन्दभ ः सम्र्प ण ू जातक ५४७ र्प काशन ्र
एक श्लाकमा ब े द्ध–तथागतका ु उल्ल े ख भएका े छ । महाभारतका े े
शान्ति पवमा विष्र्ण गुप्त का ु टिल्य (द्वितीय शताब्दी इ ै .र्प .) का ू
शिष्य कामन्दकलाइ पनि अर्थ विद्यासम्बन्धी आचार्य र्का रूपमा े
प्रस्तत गरिएका ु छ । यसरी विभिन्न उल्ल े ख्य आधारमा या े े
सिद्ध हनसक्छ कि महाभारतका ु वत े मान स्वरूपमा र्ध रे अ‍ै शहरू ं
मध्य बे द्ध, अशा ु क र का े टिल्य विष्णग ै प्त पछिका ु ये गका ु हा े । े
जातक–कथाका अधिका े श गाथा–श्ला ं क र रामायणका श्ला े कहरूमा े
अद्भततवरमा समानता द ू खिएका े आनन्द का े शल्यायनल ै उल्ल े खे
गरका े मननीय चिन्तनीय अध्ययन–अन े सन्धानका ु विषय हा े । े
जातक–कथामा उल्लख्य दसरथ जातक (न े . ४६१) ं
र दवधम्म जातक (६) मा राम–कथाका े रूपर े खा द े खिन्छ । े
राजा दसरथका तीन सपुत्रहरू राम, लक्खण र भरत, स ु पुत्री ु
सीतामध्य राम पण्डितलाइ े र्बा धिसे Œवका रूपमा प्रस्त े त गरिएका ु े
छ । यसरी न सै वण्णसाम जातक (५४०) रामायणका ु २–६३– े
२५ मा उल्लख्य श्रवणक े मारका ु कथासँग मिल्दा े जे ल्दा ु दे खिन्छ । े
वस्सन्तर जातक (५४७), महाजन जातक (५३९) का े कथावस्त े ु
पनि राम–कथासँग मिल्दाजे ल्दा ु छ । अन्य जातक कथाहरू े
पनि थप्र ु उदाहरणीय छन् । बा ै द्ध जातक–कथा र रामकथा वा ै
महाभारत र रामायणमा उल्लेख्य कथा–कहानीको
एकरूपतासम्बन्धी विषय एतिहासिक अध्ययन–अन े सन्धान गन ु हरूर्का े े
लागि महŒवपणू र्ह नसक्छ । जातक–कथालाइ ु प्राचीनतार्का े
द्यातक मान्न चीनीया यात्री फाहियानल े पाँचा े शताब्दी इ ंै श्वीकार्मा
५०० वटा जातक सम्बद्ध चित्राकृति श्रीलकामा द ं खे का े यात्रा– े
वृतान्त, द्वितीय–तृतीय इश्वीर्प वू भरर्ह त, साँची स्त ु प परिसरमा ू
उत्कीर्ण जातक–कथा सम्बद्ध चित्राकृति, चाबहिलको
चिच्छवीकालीन शिलालखमा उत्कीण े चन्दकिन्नरी जातर्क
(४८५), एतिहासिक ग्रन्थ मिलिन्द–प्रश्नमा उल्ल े ख्य २८ वटा े
जातक–कथा आदिले जातक–कथाको प्राचीनता एवं
विकासक्रमलाइ अध्ययन गर्न मार्ग प्रशस्त भएर्का दे खिन्छ । े
परियत्ति, प्रतिपत्ति व पटिवधशासन, त्रिविध–शिक्षा वा े
शील, समाधि र प्रज्ञा बार गम्भीर ज्ञान पृथक पृथक रुपमा े
जातक–कथाभित्र छरिएका छन् । कजात–कथाका मे लध्यय ू
भन वा अभिप्राय भन्न ुं नु धामि ै क शिक्षा–उपर्द शमे लक द ू शना े
हा । तथापि जातक–कथामा उल्ल े ख्य तत्कालीन ब े द्धधम ु र्का े
प्रचार–प्रसार एव त्यसका ं प्रभाव रह े का े सम्बद्ध क्ष े त्र इ े श्वीर्प र्वू
छठा ै शताब्दीप ंै वूर्का सामाजिक, आथि े क, र्भा गा ै लिक तथा े
एतिहासिकतासम्बन्धी प े णू ज्ञान प्राप्त गर्न मर्ह Œवपणू सहर्या गा े
प्राप्त हनु दे खिन्छ । बा े द्ध वाङमय जात कथाभित्र प्रव ै श गर्दा े
जातक कथाका अन े हार ला ु क–साहित्य जस्ता े पनि द े खिन्छ । े
यसभित्र पशपन्छिद ु खि द े वमन े ष्य र बा ु टविरुवाका े कथानक े
चित्रण सगृहीत छन् । गद्यपद्य श ं ली, साहित्यिक, व्यावहारिक ै
नीतिसम्बन्धी कथा, रमाइला रा े माञ्चकारी एव े साहसिक यात्रा ं
विवरणयक्त कथा, नाटक, उपन्यास, खण्डकाव्य, महाकाव्य, ु
हाँस्य व्यङ्गग्य–विनाद, धामि े क र्न तिक, श ै क्षिक, प्रशासनिक ै
क्षत्रलाइ े दिशा–निर्द श गर्न े , सार्थ कतातिर र्दा ह¥याउन नीतिगत े
कामकराु जातक–कथामा सम े टिएका छन् भन्न े के रा प ु र्णू
अध्ययनबाट स्पष्ट हन्छ । त्यस्ता ु महत्वप े णू त्रिपिटक ग्रन्थमध्र्य े
मानिन जातक–कथा आज न े पाल भाषामा अन े भवी एव ु प्रसिद्ध ं
त्रिपिटक अनवादकका रूपमा छ ु ट्टु पहिचान स्थापित व्यक्तित्व ै
ललितपर निवासी द ु ण्डबहाद ु र वज्राचाय ु (सार्न भाइ उपासक) ु
का धामि े क श्रमबाट प्रकाशन र्ह न गइरह ु का े सम्बद्ध सब े का ै
लागि धम–र्गा रवका ै विषय भएका े छ । े
अनदित जातक–कथालाइ ु ६ वटा भागमा जातर्क
बाखँ – १, २, ३, ४, ५, ६ गरी करिब ३००० पृष्ठमा एकचा ै टी े
विमाचन ह े नु प्रथमबार न ु है नुपछु , र्या सव े था अतीव धर्म र्–
गारवका ै विषय हा े । म े ल ग्रन्थका ू अन े वाद क्रममा अन ु वादक ु
अनभवी भएका ु कारण आफ्ना े अन े कु ल अन ू वाद गन ु भन्र्दा ु
मालिक ग्रन्थका ै भाव तलमाथि पला े न् कि भनी आषिर्क
अनवाद एव ु शब्द प्रया ं गमा ध े रे नै सजगता अपनाएका ै दे खिन्छ े
भन अझ पाठकलाइ े सर्च त गन े अर्न वादक भरमग्द ु र सच ु ते
रहका े दे खिन्छ । दीघनिकाय,ा मज्झिमनिकाय, स े यं त्तनिकाय ु
आदि त्रिपिटकका अनवादक द ु ण्डबहाद ु रलु थे प्र ु ग्रन्थ न ै पालभाषा े
एव नं पालीमा अन े वाद गरिसक ु का छन् । उहाँबाट अन े दित ु
महत्वपणू जातक–बाखँ यथाशीघ्र र्न पाली भाषामा सम े त अन े वादु
कृति जनमानसल अध्ययन गन े पाउन् भन्र्न आशा गरा े । ंै
जातक–कथा अनवादकक ु परिवारबाट आथि ै क र्स या ं जने
गरी प्रकाशन हनु सा े ग्रन्थबाट स े ग्रह ह ं नु सम्प े णू आर्थि र्क
रकम त्रिपिटक अनवाद परिया ु जनामा प्रदान गन े र्घा े षणा गरिन े ु
स्वयमा गा ं रवका ै विषय हा े । े
नव वष २०६९ र्का प्रव े श स े गं व ै शाख २ गत ै े
विमाचन ह े नु जातक–बाखँ (जातक कथा १–६ भाग) ल े े
नपालका े धम े , साहित्य, भाषा क्र्ष त्रमा एउटा नयाँ आयाम थपिन े े
भएका छ । यस्ता े धामि े क, भाषिक, साहित्यिक, सामाजिर्क
क्षत्रमा प्रभावकारी आयामिक काय े गर्न र्बे द्धशासनिक व्यक्तित्व ु
श्री दण्डबहाद ु र वज्राचाय ु लार्इ नव वर्ष २०६९ एर्व बं .सु २५५६ ं
का मे त्रीप ै णू र्श भकामना ु । प्
मङ्ल, भदौ ३१, २०७६ मा प्रकाशित
बानेश्वरकी अनिता थापा सप्ताहन्तमा प्रायः छोरी लिएर घुम्न जाने ठाउँ हो, रानीबारी सामुदायिक वन। काठमाडौं कंक्रिट जंगलमा परिणत भइरहेका बेला पाँचवर्षे छोरीलाई प्रकृतिसँग घुलमिल गराउन मध्यसहरको यो वन उपयोगी भएको उनी बताउँछिन्। ‘म नजिकै बस्ने भए सधैंजसो जान्थेँ होला,’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँ धेरै प्रकारका पुतली, कीराकिरी, चराचुरुङ्गी...
पानी सबैको निम्ति अत्यावश्यक छ, जुन नैसर्गिक अधिकारको वस्तुमा पनि पर्दछ । तर अहिले भने यसको वितरणमा राज्यले उदासिनता देखाउँदै आएको छ । जसले गर्दा काठमाडौं लगायतका देशका प्रमुख शहरहरुमा पानीको चरम अभाव छ । यसरी पानीको अभावलाई परिपुर्ति गर्न हामीले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका...
‘भ्रमण’ भन्ने वित्तिकै घुम्ने काम वा घुमाई भन्ने बुझिन्छ । मानिस स्वभावैले एकै स्थानमा बस्न चाहाँदैन । परिवर्तनको अपेक्षा हरबखत गरिरहन्छ । कुनै नयाँ स्थानमा गएर नयाँ नयाँ अनुभवहरु सँगाल्ने र ती अनुभवहरु आफ्ना साथीभाइ परिवारका सदस्यहरुलाई बाँड्ने उत्कण्ठा हरपल बोकिरहेको हुन्छ मानिसले । कुनै...
नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठान नाला उपशाखा तदर्थ समितिको बिशेष कार्यक्रम सम्पन्न
श्रावण ७ गते / उग्रचण्डी भगवती मन्दिर नाला लागंटोल परिसरमा रहेको देवानन्द सत्तलमा नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठान काभ्रे शाखा,नाला उपशाखा तदर्थ समितिको अनुशिक्षण,आजीवन सदस्यताको प्रमाण र धडकन स्मारिका बितरण समारोहका साथै प्रत्यक सहभागीको रक्तचाप नाप्ने,तौल लिने,उचाई नाप्ने र कम्मर नाप्ने कार्यक्रम स’सम्पन्न भएको छ /...
महाकाव्य “बसन्तपल्लव” भित्र नालाको चर्चा
पूर्णप्रकाश नेपाल “यात्री” भोजपुर कटुन्जेमा बि.सं १९९१ मा जन्मनु भएको हो। उहा भोजपुरमा जन्मिएता पनि बिराटनगर हुदै काठमान्डौ कपनमा बसाई सरे। यात्री एक बहुआयामिक नेपाली साहित्यिक प्रतिभा हुन् । उनले कबिता काब्य,उपन्यास,निबन्ध-नियात्रा र खोज अनुसन्धानमा धेरै समय बिताए। उहाका कबिता काब्यहरुमा वर्णाश्रम धर्म (खण्डकाव्य २००९)...
नालामा महालक्ष्मी जात्रा आजबाट शुरु
हरेक बर्ष वैशाक शुक्ल दितियादेखि शुरु भइ पंचमीसम्म संचालन हुने नालाको महालक्ष्मी जात्रा आजबाट सुरु हुदैछ/चार दिन मध्य पहिलो दिन महालक्ष्मीदेवीलाई देवताघरबाट करिब २ बजेतिर इपाटोलको लक्ष्मीपाटीमा दर्शनको लागि राखिन्छ/ यसलाई “द्यो कोहं बिज्यागु” भनिन्छ/करिब ४/५ बजेतिर सानो रथमा(लिला खचा)राखीबाजा गाजा सहित रथलाई बोकेर नालाबाट...